Ciidanka dalka Kenya ,DFKM iyo Raaskaambooni oo qabsaday Afmadow
May 31, 2012 - Written by
Kismaayo:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in ciidamo huwan ah oo ay hogaaminayaan ciidanka dalka Kenya ay qabsadeen degmada Afmadow ka dib markii ay saaka 11.00 subaxnimo ay ciidanka Al-shabaab ka baxeen magalaada iyagoo u dhaqaaqay duleedka magaalada.
Ciidanka huwanta ah ayaa saaka ka soo dhaqaaqay degaanka Qooqaani balse dagaal ayaa ku qabsaday degaanka Xayo walow markii danbe ay u suurto gashay in ay u soo talaabaan dhinac degmada Afmadow. Cabdinaasir Seerar oo ah Sarkaal ka tirsan ciidanka Raaskaambooni oo saaka saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ciidankoodu ay ka soo dhaqaaqeen degaanka Qooqaani ayna soo mareen degaanka Xayo wax dagaal xoog lehna aysan la kulmin ayna hadda ciidankoodu dul fadhiyaan degmada Afmadow.
Cabdinaasir Seeraar ayaa qiray in ciidanka dalka Kenay ay qayb ka yihiin dagaalka oo ay gacan ku siinayaan in dhamaan Gobolka Jubada Hoose ay ka qabsadaan ururka Al-shabaab oo in mudo ah ka talinayey Gobolka Jubada Hoose .
Ciidanka huwanta oo ka kooban ciidanka dalka Kenya, ururka Raaskaboon oo uu guddoomiye u yahay Axmed Madoobe , ciidanka DFKM ayaa hadda ku sugan gudaha magaalada waxaan ay magaalada ka dhex samaysteen fariisamo dhowr ah. Degmada Afmadow ayaa ah degmo muhiim ah waxaan ay u jirtaan magaalada Kismaayo ilaa 120 KM.